Umaki: inhloso yezivakashi | Martech Zone
Umaki: inhloso yezivakashi
Izizathu Ezi-5 Isivakashi Esifikile Ekhasini Lakho
NgoLwesibili, Okthoba 13, 2020 NgoLwesibili, Okthoba 13, 2020 Douglas Karr
Izinkampani eziningi kakhulu zakha iwebhusayithi, iphrofayili yomphakathi, noma ikhasi lokufika ngaphandle kokuqonda inhloso yesivakashi. Abaphathi bemikhiqizo bacindezela umnyango wezokumaketha ukuthi ubhale uhlu lwezici. Abaholi bacindezela umnyango wezokukhangisa ukuthi ushicilele okutholakele kwakamuva. Amathimba okuthengisa acindezela umnyango wezokumaketha ukuthi ukhuthaze ukunikezwa bese uhamba phambili. Lokho konke kuyizisusa zangaphakathi njengoba ubheka ukuklama iwebhusayithi noma ikhasi lokufika. Lapho sakha futhi sakha ubukhona bewebhu be-
Ubukhulu obu-3 bokuDalwa kokuqukethwe
NgoLwesihlanu, Septhemba 26, 2014 NgoLwesihlanu, Okthoba 17, 2014 Douglas Karr
Kunokuqukethwe okuningi okukhiqizwa kuwebhu njengamanje engikuthola kunzima kakhulu ukuthola izindatshana zenani - yize kuseshwa, kwezenhlalo noma kokuphakanyiswa. Ngishaqekile ngendlela amasu amaningi wokumaketha okuqukethwe angajulile ngayo kumasayithi ezinkampani. Abanye bebesanda kuba nezindaba zakamuva nokukhishwa kwabezindaba mayelana nenkampani, abanye banezinhlu eziningi, abanye banokukhishwa okufakiwe mayelana nemikhiqizo yabo, kanti abanye babenomcabango onzima